Ny mahery fo WTN avy amin'ny firenena 128 dia tia an'i Kenya: ny tsenan'ny World Travel any London no hanatanterahana izany
Home » Lahatsoratra farany farany » WTN » Ny mahery fo WTN avy amin'ny firenena 128 dia tia an'i Kenya: ny tsenan'ny World Travel any London no hanatanterahana izany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • WTN
Oktobra 24, 2021
Misy mahery fo an'arivony ao amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany. Misy ny matihanina amin'ny fizahantany very ny zava-drehetra noho ny COVID. Matetika izy ireo dia tsy mitonona anarana. Ny mahery fo WTN ho an'ny mivantana dia ny ANONOMYOUS Tourism Hero!
Fihaonana manokana voalohany ho an'ny World Tourism Network dia nokasaina tamin'ny seho ara-barotra First Global Travel nanomboka tamin'ny areti-mifindra, ny Tsenan'ny dia an'izao tontolo izao tany Londres.
Ny mahery fo voalohany neken'ny WTN dia ny tompon'andraikitra amin'ny fizahantany Kenya, ny Minisitra Najib Balala.
Ity dia fotoana iray hihaonana amin'ireo maherifo marobe ary Mpikambana WTN iolona iray taorian'ny fivorian'ny zoom malaza efa ho 2 taona.
Ny World Tourism Network dia manasa ireo mpandray anjara manatrika ny World Travel Market any London hanatrika ny fandraisana ny Heroes Tourism an'ny Mpizahatany ary hihaona amin'ireo mahery fo fizahan-tany marobe manatrika ity seho varotra lehibe voalohany nanerantany taorian'ny nanombohan'ny areti-mandringana.
Ny mahery fo telo voalohany fantatry WTN dia Hon. Najib Balala avy any Kenya, ny Hon. Edmund Bartlett avy any Kenya, ary Dr. Taleb Rifai Sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha avy any Jordania. Izy telo mianadahy dia hiditra ao amin'ny World Network Network ao amin'ny Magical Kenya Stand any London.
Kenya no ho mpampiantrano voalohany amin'ity fihaonan'ny mahery fo sy mpikambana WTN ity mandritra ny WTM any London.
Ny Kenya Stand AF245 no toerana hanatontosana ny alatsinainy 1 novambra, 4.00 hariva
Misy fampahalalana bebe kokoa hita ao amin'ny mahery fo websit hetsikae
Ny Hall of the International Tourism Heroes dia misokatra amin'ny alàlan'ny fanendrena ihany hahafantarana ireo izay naneho fahaiza-mitarika, fanavaozana ary fiasa miavaka. Mandeha ny dingana fanampiny ny Maherifo momba ny fizahantany.
Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network dia nilaza hoe:
“Tena sakaizan'ny fizahantany manerantany i Kenya. Taorian'ny fivoriana mihoatra ny 200 zoom dia maro amin'ireo mpikambana WTN no lasa mpinamana be.
Ny maherifonay dia nanome antsika aingam-panahy handresy ireo fanamby maro. Tsy andriko ny hihaona mivantana amin'ireo maherifontsika sy mpikambana ao amintsika.
WTN dia firenena 128 ankehitriny ary mpikambana mahery 1000 mahery.
Ho an'ny World Tourism Network Kenya no ivon'ny World Travel Market any London.
Miaraka amin'ireo namantsika kenyanina rehetra, ny tontolon'ny fizahan-tany dia reharehan'ny maherifonay voalohany, Hon. Najib Balala, sekreteran'ny fizahan-tany ho an'i Kenya. Tena azony ilay izy!